Sargaal Qaramada Midoobay katirsan oo sheegay in burcad-badeeda wali ay khatar yihiin inkastoo guulo laga gaaray - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSargaal Qaramada Midoobay katirsan oo sheegay in burcad-badeeda wali ay khatar yihiin inkastoo guulo laga gaaray
November 17, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Xeebaha Soomaaliya ayaa hoy u ahaan jirtay burcad-badeed mudadii u dhaxaysay 2006-2012. [Sawirka: AFP]
Nairobi-(Puntland Mirror) Khatarta burcad-badeeda xeebaha Soomaaliya wali waa muuqataa inkastoo guulo badan laga gaaray, sida uu sheegay sargaal katirsan Qaramada Midoobay.
Andrew McLaughlin, oo ah sargaal katirsan haayada Qaramada Midoobay u qaabilsan mukhaadaraadka iyo dambiyada ee UNODC, ayaa wakaalada wararka Shiinaha ee Xinhua u sheegay isaga oo jooga Nairobi in xaalada liidata ee dhanka siyaasada, dhaqaalaha iyo ammaanka ee ka jirta Soomaaliya ay dib u kicin karto burcad-badeedii Soomaalida.
“Burcadii gudaha Soomaaliya lama garaacin laakiin geliya waa lala diriray. Khatarta waa mid soo noqon karta tan iyo inta xaalada ammaanka iyo mida dhaqaalaha ee Soomaaliya ka jirta ay tahay mid khatar ah,” ayuu yiri sargaalka UNODC.
Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay haysato dhammaystir la’aan ka jirta awooda ciidamada iyo shaqo la’aanta sare oo dhalinyarada haysata oo keeni karta dib u soo noqoshada burcadii.
“Waxyaabaha sababi kara waxaa kamid ah sida shaqo la’aanta sare ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed,” ayuu yiri McLaughlin.
Waxa uu sheegay dhiirigalinada dhaqaale sida dib u dhiska warshadaha kalluunka ee Soomaaliya in ay yarayn karto shaqo la’aanta dhalinyarada ku keeni karta burcad-badeednimo.
Xigasho: Xinhua news agency + Puntland Mirror.
Piracy still a threat off Somalia despite successes, UN official say
Mogadishu-(Puntland Mirror) A Zoobe junction in Mogadishu was renamed in honor of victims of Mogadishu truck bombing, Mogadishu mayor said. Speaking to reporters in Mogadishu on Thursday, Mogadishu mayor Tabid Abdi Mohamed said the old [...]